Inhlanzeko Yedatha: Isiqondisi Esisheshayo Sokuhlanganisa Idatha | Martech Zone
Ukuhlanganisa ukuhlanza kungumsebenzi obalulekile wokusebenza kwebhizinisi njengokumaketha okuqondile kweposi nokuthola umthombo owodwa weqiniso. Kodwa-ke, izinhlangano eziningi zisakholelwa ukuthi inqubo yokuhlanganisa i-purge ikhawulelwe kuphela kumasu nemisebenzi ye-Excel eyenza okuncane kakhulu ukulungisa izidingo eziyinkimbinkimbi zekhwalithi yedatha.
Lo mhlahlandlela uzosiza abasebenzisi bebhizinisi nabakwa-IT ukuqonda inqubo yokuhlanganisa, futhi mhlawumbe kubenze babone ukuthi kungani amaqembu abo engasakwazi ukuqhubeka nokuhlanganisa nokuhlanza nge-Excel.
Yini i-Merge Purge Process noma Umsebenzi?
Hlanganisa ukukhipha inqubo yokuletha imithombo eminingana yedatha endaweni eyodwa ngenkathi ngasikhathi sinye kususwa amarekhodi amabi nokuphindeka emthonjeni.
Kungachazwa kalula kusibonelo esilandelayo:
Qaphela ukuthi isithombe esingenhla sinamarekhodi amathathu afanayo anezinkinga eziningi ezihlobene nekhwalithi yedatha. Lapho kufakwa umsebenzi wokuhlanganisa ukuhlanganisa leli rekhodi, lizoguqulwa libe umphumela ohlanzekile futhi oyedwa njengesibonelo esingezansi:
Lapho uhlanganisa futhi uhlanza izimpinda ezivela emithonjeni eminingi yedatha, umphumela ukhombisa uhlobo oluhlanganisiwe lwerekhodi lokuqala. Kufakwe enye ikholomu [Imboni] kwirekhodi, itholwe kolunye uhlobo lwerekhodi.
Ukukhishwa kwenqubo yokuhlanganisa yokuhlanza kudala amarekhodi aqukethe imininingwane eyingqayizivele esebenza ngezinjongo zebhizinisi ledatha. Esibonelweni esingenhla, lapho sithuthukiswa, idatha izosebenza njengerekhodi elithembekile kubakhangisi kumikhankaso yemeyili.
Izindlela ezihamba phambili zokuhlanganisa nedatha yokuhlanza
Ngaphandle komkhakha, ibhizinisi, noma usayizi wenkampani, ukuhlanganisa izinqubo kusebenza njengesisekelo sezinhloso zokuqhuba idatha. Yize ukuzivocavoca bekukhawulelwe kuphela ekuhlanganisweni nasekuqedweni, namuhla ukuhlangana nokuhlanzwa kuguquke kwaba yindlela ebalulekile eyenza abasebenzisi bakwazi ukuhlaziya imininingwane yabo ngokuningiliziwe.
Yize inqubo isetshenziswa kakhulu manje ngokusebenzisa okubanzi hlanganisa isoftware yokuhlanza namathuluzi, abasebenzisi basadinga ukugcina izindlela ezinhle kakhulu zokuhlanganisa idatha. Okulandelayo ngincoma kakhulu ukuthi ukulandela:
Ukuhlala Ugxile kwikhwalithi yedatha: Ngaphambi kokwenza umsebenzi wokuhlanganisa ukuhlanza, kubalulekile ukuhlanza nokumisa idatha, ngoba lokhu kuqinisekisa ukuthi inqubo yokwakhiwa kabusha kulula. Uma wehla ngaphandle kokuhlanzwa kwedatha, imiphumela izokudumaza kuphela.
Ukunamathela kuhlelo olungokoqobo: Lokhu kwenzeka ukuthi inqubo elula yokuhlanganisa idatha akuyona into eza kuqala kuwe. Kunconywa ukuthi usungule uhlelo oluzosiza ukuhlola uhlobo lwamarekhodi owafunayo ukuwahlanganisa nokuwahlanza.
Ukuthuthukisa Imodeli Yakho Yedatha: Ngokuvamile, ngemuva kwenqubo yokuqala yokuhlanganisa, izinkampani zithuthukisa ukuqonda okungcono imodeli yazo yedatha. Lapho nje ukuqonda kokuqala kwemodeli yakho sekuthuthukile, ungenza ama-KPIs futhi unciphise isikhathi esichithwa kunqubo yonke.
Ukugcina irekhodi lohlu: Ukuhlunga uhlu akusho ngokususa uhlu ngokuphelele. Noma iyiphi i-software yokuhlanganisa i-purge software izokusiza ukuthi ugcine amarekhodi futhi ugcine i-database yenguquko ngayinye eyenziwe ohlwini.
Ukugcina Umthombo Owodwa Weqiniso: Lapho idatha yomsebenzisi itholwa kumarekhodi amaningana, kunokungafani kubhekana ngenxa yolwazi olungafani. Kulokhu, ukuhlanganisa nokuhlanza kusiza ukudala umthombo owodwa weqiniso. Lokhu kufaka lonke ulwazi oludingekayo mayelana nekhasimende.
Izinzuzo ze-Self-Service Merge Purge Software
Isixazululo esisebenzayo sokwakha umthombo owodwa weqiniso ngenkathi uqinisekisa ukuthi ulandela imikhuba emihle esele, ukuthola isoftware yokuhlanganisa. Ithuluzi elinjalo lizobhala phezu kwamarekhodi amadala kusetshenziswa imininingwane emisha ngenqubo yokusinda kwedatha.
Ngaphezu kwalokho, izinsiza kusebenza zokuhlanganisa amathuluzi wokuhlanza zingenza abasebenzisi bebhizinisi bakwazi ukuhlanganisa kahle futhi bahlanze amarekhodi abo wedatha ngaphandle kokwenza ukuthi kudingeke ukuba babe nolwazi olujulile lohlelo noma ulwazi.
Ithuluzi lokuhlanganisa elihlanzekile lingasiza abasebenzisi bebhizinisi nge:
Ukulungiselela idatha ngokuhlola amaphutha kanye nokuvumelana kolwazi
Ukuhlanza nokumisa idatha ngokuya ngemithetho yebhizinisi echaziwe
Ukuqondanisa uhlu oluningi ngokuhlanganiswa kwama-algorithm asunguliwe
Isusa izimpinda ngezinga eliphezulu lokunemba
Ukwenza amarekhodi egolide nokuthola umthombo owodwa weqiniso
Akudingeki ukuthi, esikhathini lapho i-automation ibaluleke kakhulu ekuphumeleleni kwebhizinisi, izinkampani azikwazi ukubambezela ukusebenzisa idatha yazo yebhizinisi. Ngakho-ke, amathuluzi wamanje wokuhlanganisa / wokuhlanza amathuluzi manje abe yisixazululo se-flagship sezinkinga ezindala ezihlobene nezinqubo eziyinkimbinkimbi zokuhlanganisa nokuhlanza idatha.
Imininingwane yenkampani ingenye yezimpahla zabo ezibaluleke kakhulu - futhi njenganoma iyiphi enye impahla, idatha idinga ukunakekelwa. Yize izinkampani sezigxile ekutholakaleni i-laser ekutholeni inani elandayo lolwazi nasekuqiniseni ukuqoqwa kwazo kwemininingwane, idatha etholakele igcina isalalele futhi ithathe i-CRM ebizayo noma indawo yokugcina isikhathi eside. Ezimweni ezinjalo, idatha idinga ukuhlanzwa ngaphambi kokuthi isetshenziselwe ukusetshenziswa kwebhizinisi.
Kodwa-ke, inqubo eyinkimbinkimbi yokuhlanganisa / yokuhlanza ingenziwa lula ngesoftware eyodwa yokumisa ukuhlanganisa okusiza ukuhlanganisa imithombo yedatha futhi wakhe amarekhodi abaluleke ngempela.
IDatha Ladder yinkampani yesoftware yekhwalithi yedatha ezinikele ekusizeni abasebenzisi bebhizinisi ukuthi bathole okuningi ngemininingwane yabo ngokufaniswa kwedatha, ukuphrinta, ukuphinda, kanye namathuluzi wokucebisa. Noma ngabe kumataniswa nezigidi zamarekhodi ngokusebenzisa ama-algorithm ethu afanayo, noma ukuguqula idatha yomkhiqizo oyinkimbinkimbi ngobuchwepheshe be-semantic, amathuluzi ekhwalithi yedatha yedatha ahlinzeka ngezinga eliphakeme lenkonzo elingenakuqhathaniswa embonini.
Landa Isilingo Samahhala
Tags: ukuhlanzwa kwekheliikheli le-geocodingukuqinisekisa ikheliidatha ye-crmIdathaUkuhlukaniswa kwedathainsizakalo yokuhlanza idathaukunothisa idathainhlanzeko yedathaileli yedathaukufaniswa kwedathaukufakwa kwedathaikhwalithi yedathaukuphathwa kwekhwalithi yedathaamadamatchibhizinisi le-datamatchukuzikhohlisaidatha yebhizinisiubuchule obufanayohlanganisa ukusulaumdlalo umdlaloukurekhoda ukuhlanganisaidatha engahleliweukuhlukaniswa kwedatha okungakhiweukuhlanzwa kwedatha okungakhiwe
UJaveria Gauhar, umbhali we-B2B / SaaS onolwazi ogxile ekubhaleni umkhakha wokuphathwa kwedatha. KwiDatha Ladder, usebenza njenge-Marketing Executive, obhekele ukusebenzisa amasu wokumaketha angenayo. Ungumqambi futhi unolwazi lweminyaka engu-2 ekuthuthukiseni, ekuhlolweni nasekugcineni izinhlelo zokusebenza zebhizinisi.